“ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ” (ရှက်တတ် သူ များ မ ဖတ် ရ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » “ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ” (ရှက်တတ် သူ များ မ ဖတ် ရ)
“ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ” (ရှက်တတ် သူ များ မ ဖတ် ရ)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 12, 2014 in Community & Society, Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 54 comments
ကို ပေါက် လက်ဆောင် အ တွေး ပါး ပါး လေး
“ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ”
(ရှက်တတ် သူ များ မ ဖတ် ရ)
ဘာ လင် တိုင်း ဒေးကို မြန် မာ မူ့ ပြု လိုက် တဲ့
“မဟာ သံ ၀ါ သ နေ့ “ မှာ အခန်း ငှား ရ တာ ခက်တဲ့ ဇာတ် လမ်း ကို
“ခရီး သည် ကြီး “က ရေး ပြီး လျောက် သွား နေ တော့ “က ထူး ဆန်း “က
“ဗျို့ ခ ရီး သည် ကြီး” ဆို လက် ယပ် လှမ်း ခေါ် ပြီး
ယပ် ခပ် လိုက် ပေး လိုက် ပါ တယ်။
အဲ ဒီ အခါ မှာ တော့
သ တင်း အ ကြား နဲ့ အတင်း တံ ခါး ဖွင့်  ပြီး လာ သူ က လာ နဲ့
အ ပြေး အလွှား ၀င် သူ က ၀င် နဲ့
“ အ တူ နေ ၏ မ နေ ၏” တို့
“ မ နေ စ ကောင်း….နေစကောင်း “တို့
“စောင့် ထိန်းသင့် ၏ မသင့်၏” တို့
“မ ကျွေး စေ ကာင်း………ကျွေး စေ ကာင်း “ တို့
ဆို သ ဟာ တွေ ကို ကြီး ကြီး ငယ် ငယ် ရွယ် ရွယ် လတ် လတ် ကျား ကျား မ မ
အ လုံး စုံ က ပရွက် အုံ တုတ် ထုိး သလို ရွရွစိစိ နဲ့ ဆွေးနွေး လိုက် ကြ
တာ များ အ ရင် ကေ ခြာက် သွေ့ နေတဲ့ ကျုပ် တို့ ရွာ ကြီး တောင်
ရေ လောင်းစ ရာ မလို ဘဲ စို စို ပြေ ပြေ ကို ဖြစ် လို့ သွား ပါ သ ဗျာ။
အဲ သ မှာ ခေတ် သစ် နဲ့ ခေတ် ဟောင်း တို့
အ တွေး သစ် နဲ့ အတွေး ဟောင်းတို့ ဆို တာ တွေ ကို
ကိုယ် ကြိုက် တဲ့ ဘက် က ကို ယ် နေ ပြီး ပြော ကြ သေ ပါ့။
အဲ ဒီ အချိန် မှာ ခေတ် မှီတဲ့ အ တွေး အ ခေါ် တွေ
အ သစ် အ ဆန်း ကို လက် ခံ နိုင် တယ်
ကျားနဲ့ မ အ ခွင့် အ ရေး တန်း တူ ရ ရ မယ် လို့ ဆို ပြန် တော့
LT လို့ အတို ကောက် ခေါ် ကြ တဲ့
လက် မ ထပ်ဘဲ အ တူ နေ တယ် ဆို သ ဟာ ကြီး ကို လ က်ခံ တယ် ဆို တဲ့ လူ က
လဲ လက် ခံ သပေါ့။
ဒီ တော့ ကာ
“ကွန် ဆာ ဗေး တစ် လို့  ခေါ် ချင် ခေါ် ပါစေ………..ဒါ ကို ဗွေ မယူ နိုင် ပါဘူးေ လ” ဆိုပြီး
အမျိုး ဘာ သာ ၊သာ သ နာ ဆို ပြီးရိုး ရာ ယဉ် ကျေး မူ့ ကို ထိန်း သိမ်း စောင့် ရှောက် ချင် သူ များက
လဲ ခါး ခါး သီး သီး ကန့် ကွက် လာ ပြန် ပါ တယ်။
ဒါ က တော့ ခေတ် အ ဆက် အဆက် သူ့ ဘက် ကိုယ့် ဘက် ရှိ ကြ မှာ ပါ ဘဲ။
ကျုပ် နား လည် ထား တာ က တော့ ရှင်း ရှင်းေ လး ပါ ဘဲ။
သ များ တွေ နိုင်ငံ မှာ တော့ ဘယ် လို လက် ထပ် မှ ဘယ် လို တရား ၀င် တယ် ဆို တာတော့ကျုပ် မသိ ဘူး။
ကျုပ် တို့ ဆီ မှာ တော့ စု လျား ရစ် ပတ် ထိမ်း မြား လက် ထပ် ဆို တာ
ပိုက် ဆံ ရှိ တဲ့ သူ တွေ မှ ချဲ့ ကား ပြီး လုပ် တဲ့ အလုပ် လို့ ကျုပ် ကတော့ မြင် တာ ပါဘဲ။
သတ် မှတ် ချက် တောင် ရှိ သေး တာ ဘဲ
“ ပု ဆိုး တန်း တင် အကြင် လင် မယား
ဟို ဘက်7အိမ် ဒီ ဘက်7အိမ် သိ တယ် ဆို ရင် လဲအ ကြင် လင် မယား “ဘဲ လို့
ပြတ် ပြတ် သား သား ဆို ထား မှ တော့ ဘာ လို သေး လဲ အ ချစ် ရယ် ပေါ့ နော်။
ကဲ ဒါ က ထား လိုက် ပါ တော့။
ဟိုနေ့ ကကျုပ် ကကျောက် တော် ကြီး ဘုရားထဲရောက်သွားရော။
အဲဒီ မှာကကော သလ မင်း အိပ် မက် ၁၆ ချက်ကို ပန်း ချီ ကား တွေ နဲ့ ချိတ် ပြ ထား တာက
စောင်း တန်း အ၀င် ၀ မှာ ရှိ တယ်။
ကျုပ် လဲ ပျင်းပျင်းနဲ့ လျောက် ဖတ် တာ ပေါ့။
အဲ ဒီ မှာ ဘာ သွား တွေ့ လဲ ဆို တော့
အ ပင် ပေါက် စ န လေး တွေ က အသီး တွေ သီး နေ တာ ကို အိပ် မက် မက် တာကို
အ နက်ကောက် လိုက် တာ က နောင် လာ မည့် ခေတ် တွင် ငယ် ငယ် ရွယ် ရွယ်နဲ့
အိမ် ထောင် ကျ ပြီး က လေး တွဲ လောင်း ဖြစ် လ တ္တံ ပါ တဲ့။
အဲ ဒီ ပန်း ချီ ကား ထဲ က ပါ တာ တွေ နဲ့ အပြင် မှာ ဖြစ် ပျက် နေ တာ တွေကို ချိန် ထိုး ကြည့်
တော့ တကယ် လဲ ဟုတ် နေ သလို ပါဘဲ။
ခု ခေတ် က လေး တွေ က ဒီ ကိ စ္စ နဲ့ ပါတ် သက် ရင် အ သိ စော ကြ တယ်။
ကျုပ် တို့ ငယ် ငယ် က နဲ့ စာ ရင် ပြော တာ ပါ။
ကျုပ် တို့ ငယ် ငယ် ဆို တာ လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် လေး ဆယ် လောက် ကကို ဆို လို တာပါ။
ကျုပ် တို့ တုံး က လူ ကြီး တွေ က “ညီ လေး ဘယ် က ရောက် လာ”လဲ လို့ များ
“မေ့ မေ့ ဗိုက် ကြီး ထဲ က လာ “ “မေ မေ့ ဖင် ကြီး ထဲ က လာ” ဆို တာ လောက်ဘဲ
သိ ခဲ့ ကြ တာ ကိုး ဗျ။
ကျုပ် တို့ ခေတ် တုံး က ဒီ လို လ င် ယူသား မွေး ကိစ္စ တို့ ဘာညာ ကွိ ကွ တွေ ဆို တာ
က ရှက် စ ရာ ကောင်း တဲ့ ကိစ္စ လို့ သတ် မှတ် ထား ကြ ဖုံး ကွယ် ထား ကြ တတ် ပါ တယ်။
ဒီတော့ ဗဟု သု တ အ နေနဲ့ လဲ မ ပြော ကြ တော့ ဘာ မှ မ သိ ကြ ဘူး ပေါ့။
ကျုပ် တို့ ငယ် ငယ် ကလဲ ဒေါက် တာ အောင် ခင် ဆင့် ရဲ့ “ဖို မ ဆက် ဆံ ရေး “ တို့
“သိပ္ပံနည်း ကျ အိမ် ထောင် သည် ဘ ၀ တို့” ဆို တဲ့ ဆေး ပညာ စာ အုပ် တွေ ထွက် ပါတယ်။
ဒါ ပေ မယ့် ခေတ် မ မှီ တဲ့ မိ ဘ တွေ က ဒီ လို စာ အုပ် ကို အပျို လူ ပျို
ဖတ် တာ တွေ့ ရင် ဘဲရှက် စ ရာကောင်း တဲ့ အလုပ် ကို လုပ် နေ သလို
သ ဘော ထား ပြီး
“ အ ယု တ္တ အ န တ္တ တွေမ ဖတ် ရ ဘူး “
လို့ ဆို ပြီး ကန့်  သတ် တော့ တာ ပါဘဲ။
အဲ တော့ ယောကျာ်း လေး တွေ က တော့ ကိုယ့်  ထက် ကြီး တဲ့ အကို ကြီး တွေက
ပို့ ချ တဲ့ သင်္ခန်း စာ တွေ နား ထောင် ရ တော့ သိပ်မထူး ဆန်း ပေ မယ့်
မိန်း ကလေး အများ စု က တော့ အချိန် အရွယ် ရောက် လို့ ရာသီ ပန်း ပွင့် လို့
သွေး ဆင်း တာ ကို တောင်
“မေ မေရေ အ နာ ထဲ က သွေး တွေ ကျ လာ ပြီ “ ဆို အော် ငို ကြ တဲ့
မိန်း က လေး တွေ ရှိ လာ ခဲ့ တာပေါ့။
အ မေ တွေ အ ဒေါ် တွေကိုယ် တိုင် ကလဲ ဗ ဟု သု တ ရှိ တဲ့ သူ ရှိ ပေ မယ့်
မ ရှိ တဲ့ သူ က ပို များ ပါ တယ်။
အ တော် များ များ က တော့ သ မီး မိန်း ကလေး ကို ယောက်ျားေ လးနဲ့
နီး စပ် မှာ စိုး တော့ တစ် ခါ ထဲ ပိတ်ပြော ထား လိုက် ပါတယ်။
“ယောကျာ်းနဲ့ အိပ် ရင် ဗိုက် ကြီး မယ်”
အဲဒါ ကို မှန် ကြောင်း ရုပ် ရှင် တွေ ၀တ္တု တွေ က လဲ သက် သေ ပြ ကြ တယ်။
မိန်းက လေး နဲ့ ယောက်ျား လေး တစ်ခါ မှားတာနဲ့ ကိုယ် ၀န် ရှိ ပြ ကြ
ဒု က္ခ တွေ ရောက် ပြ ကြ ပေါ့။
အ ရှင်း ဆုံး ပြော ရ ရင် ကျုပ် တို့ ငယ် ငယ် က ဟို ကိစ္စ ဆို တာ
ပ ညာ ပေး ဆုံး မ ဘို့ မ ပြော နဲ့ လူ သိ ရှင် ကြားလေသံ တောင်
မ သ လပ်ရ တဲ့ ကိစ္စ ပေါ့ ဗျာ။
ပြော ရရင် “ မောင် နဲ့ နှမ သား နဲ့ အ မိကြား လုိ့ မှ မ တင့် တယ်”
ဆို တဲ့ စ ကား လုံး အောက် ပြား ပြား မှောက် ခဲ့ ကြ သပေါ့။
အဲ တော့ ဖို မ ကိစ္စ ဆို တာ န ကန်း တစ် လုံး မှ မ သိ ဘဲ
လူ လား မြောက် ပြီး ယောကျာ်း မိန်း မ ရ ခဲ့ ကြ ရ တာပါဘဲ။
အဲ တော့ ကျုပ် လဲပြန်တွေး ကြ ည့် မိ တယ် ဒီ လို ဟို လို လုပ် တဲ့ ကိစ္စ တွေ
ဘယ် အချိန် ဘယ် အသက် အရွယ်က ကျုပ် သိခဲ့ လဲ ဆို တာ ကို။
ကျုပ် ပြန်စဉ်း စား မိ သ လောက် က တော့ ကျုပ်တို့ 8 တန်း ကျောင်း သား
ရောက် တဲ့ အထိ
ကြက်ပေါင်ကွင်း ပစ် တုန်း
ဂေါ်လီကို လက် ခေါက် ခံ ကြေး ကျင်း စိမ် တုန်း
ကျေး သား ရိုက် တုန်း
ပို လို ကား ထပ် တုန်း
ဘောလုံး ကန်တုန်း
အ ရပ် ထဲ က ကောင် မ လေး တွေ နဲ့ ထုတ် စီး တိုးတန်း က စား တုန်း
င တက် ပြား တို့ မျောက် ညို နဲ့ ဦး စိတ် တို တို့ ဦး ကပ် စီး တို့ ကာ တွန်း ဖတ် တုန်း ရှိ သေး တာကို မှတ်မိ တယ်။
အဲ မှတ် မှတ် ရ ရ စ သိ တာ ကိုး တန်း ကျောင်း သား မှာဗျ။
ကျုပ် နေတဲ့ ကျောင်း က ယောက်ျား လေး သီး သန့် ထား တဲ့ ကျောင်း။
အဲ တော့ လွတ် လပ် တယ် ပေါ့။
ကိုး တန်း နှစ် က ကျုပ် နေ ရ တဲ့ အခန်း က အ ဆောင် ရဲ့ နောက်ဆုံး အခန်း ။
ကျုပ် တို့ နောက် အုတ် တံ တိုင်း ဘဲ ရှိ တော့ တယ်။
နောက် ဒီ အခန်း က နှစ် ကျ ကျောင်း သား ကြီး တွေ နဲ့ ကျုပ် တို့ လိုိ
ခပ် ညံ့ ညံ့ အသစ် ကောင်တွေ ရော ထား တဲ့ အခန်း။
တစ် ရက် တော့ အဲ ကျုပ်တို့ အခန်း ဒေါင့် က နံ ရံ မှာ
“ယ နေ့ စာ အုပ် အ သစ် ထွက် မည် “ လို့ရေး ထား တာ လေး ကို တွေ့ လိုက် ရ တယ်။
ကျုပ် က လဲ အဲ ဒါ ဘာ ရေး မှန်းမ မသိ တော့ စပ် စု မိ တာ ပေါ့။
အဲ ဒီ မယ် ကျောင်း သား ကြီး တစ်ယောက် က လာ ခဲ့ ဆို ပြီး နောက် ဆုံး အတန်း ကို
ဆွဲ ခေါ် သွား ပါတယ်။
အဲ ဒီ မှာ ကျောင်း သား ငါး ယောက် ခေါင်း ခြင်း ဆိုင်ပြီး အောက်ကို ငုံ့ ကြည့် နေ ကြ ပါတယ်။
ကျုပ် ဘ ၀ မှာရင် ခုန်သံ တွေ စ မြန် ခဲ့ တဲ့ နေ့ ပေါ့။
ကျ နော် လဲ သူ တို့ ကြား ထဲ တိုး ဝှေ့ ပြီး ကြည့် တော့ ဆေးရောင် စုံ စာ အုပ် ဗျ။
နိုင် ငံ ခြား က ကောင် မ တွေ ၀စ် လစ် စ လစ် ရိုက် ထား တဲ့ ပုံ တွေ။
မ မြင် စ ဘူး မြင် ရ တော့ ရင် ထဲ မှာ က တုန် က ယင် ကြီး ကို ဖြစ် လို့။
ကြည့် လို့ မှ ခဏ ရှိသေး တယ် “ ရွှတ် ရွှတ် ဆ ရာ လာပြီ “ လို့ သ တိ ပေး
သံ လဲ ကြား ရော လူ စု ခွဲ စာအုပ် ကို လွယ် အိတ် ထဲ ထိုး ထဲ့ ပြီး ကျောင်း စာ အုပ် တွေ
ခုံ ပေါ် တင် ထား လိုက် ကြ ပါတယ်။
အဲဒီ နေ့ က ဆ ရာ တွေ ဆ ရာ မ တွေ သာ တစ် ယောက် ပြီး တစ် ယောက်
တစ် ချိန် ပြီးတစ် ချိန် သင် သွား တယ် စာ ထဲ ကို စိတ် မ ၀င် စား
ဟို အဆို တော် သီ ချင်း ထဲ ကလို
“ မျက် စေ့ ထဲ က ထွက် ကို မ ထွက် ဘူး …….”ဲဖြစ် နေ တော့ တာ ပါဘဲ။
နောက် ရက် တွေ မှာ တော့ အ ကို ကြီး တွေ က ကျ နော် ကို လူ ရာ သွင်း ပြီး
စာ အုပ် တွေ ပြ ပါ တော့ တယ်။
အ စ ကတော့ မလုံ့ တလုံ ရော ပွင့် လင်း မြင် သာ ဓါတ်ပုံ စာ အုပ် တွေ ဘဲ ပြ ပါ တယ်။
နောက် တော့ လူ ပျိုများ သွေး ကြွ စ ရာ ဖတ် စာ အုပ် တွေ ကို ပြ ပေး ဖတ် ပါ တယ်။
ကျ နော် တို့ လို လက် သင် လေး တွေ က ဆ ရာ လစ် တဲ့ အချိန် ကျောင်း ဆင်း ချိန် တွေမှာ
နောက် ဆုံး တန်းး မှာ ထိုင် ဖတ် ရ ပါ တယ်။
ဖတ် ခ က တော့ တစ် ခါ ဖတ် တစ် မတ် ပါ ဘဲ။
ကျ နော် တို့ ကို တော့ စာ အုပ် အိမ် ပေး မ ငှား ပါဘူး။
ကျောင်း မှာ ဘဲ တစ် လှည့်စီ ဖတ် ပေါ့။
သူ တို့် အကြီး တွေ က တော့ တစ် လှည့် စီ အိမ်ယူပေါ့။
အားလုံးဖတ် ပြီး ရင် တော့ အဟောင်း အပ် အ သစ် ထပ် ငှား။
အဲ ဒီ နေ့ မှာ စာ သင် ခန်း ထဲ က နံ ရံ မှာ
“ယ နေ့ စာ အုပ် အ သစ် ထွက် မည် “ ရေး ထား လိုက် တာပေါ့။
ဒါ နဲ့ ဘဲ လူ ပျို ပေါက် ဘ ၀ မှာ
ပ လေးဘွိုင် တို့ ပင့် ဟောက်စ် တို့  ဟတ်စတလာ တို့ ဆို တဲ့
နိုင်ငံ တကာ အ လှ မယ် များ ရဲ့ ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ်
ဓါတ်ပုံ တွေ တို့
တစ် တစ် ခွ ခွ ရေး ထား တဲ့
“ က မ္ဘာကြီးနဲ့ မ လဲ ပါ “တို့
“ ဘုိး ဘိုး ကြီး ရဲ့ မေ တ္တာ“တို့
“ ချစ် သော ဆ ရာ မ “တို့
“ ချွေး မ အ လိ မ္မာ “တို့ ဆို တဲ့ စာ အုပ်တွေ နဲ့ ရင်း နှီး လာေ ပ မယ့်
မျက် မြင် ကိုယ် တွေ့ ဆို တာ တော့ မ ရှိ သေး ပေါ့။
တစ် ခါ တစ် လေ တော့ လဲ သူ တို့ တွေ က ဓါတ် ပုံ တွေ ယူ လာ တတ် ပါ တယ်။
နိုင် ငံ ခြား သူ လဲ ပါ ရဲ့၊
ကျုပ် တို့ မြန် မာ တွေ ပုံ လဲ ပါ တဲ့ အခါ ပါ သ ပေါ့။
တိုး တိုး တိတ်တိတ် နဲ့ စ ခဲ့ ကြ တဲ့ ဘ ၀ လေး ပေါ့။
ဒါ ပေ မယ့် ကျောင်းသား ကြီး တွေ ငှား မ လာ ရင် ကျုပ်တို့ မကြည့်ရ။
ကိုယ့် ဘာ သာ ကိုယ် အလွယ် တ ကူ သွား ငှားလို့ မရ။
သူ့ ခွင် နဲ့ သူ မှ ရ တာ ပါ။
မှတ် မှတ် ရ ရ ကျုပ် တက္က သိုလ် ဒု တိ ယ နှစ် ရောက် တဲ့ အချိန် မှာ
သူ ငယ် ချင်း တစ် ယောက် က အထူး အ ဆန်း လေး တစ် ခု ယူ လာ ပါ တယ်။
လက် နဲ့ လှည့် ကြည့် ရ တဲ့ ဓါတ် ရှင် လေး ပေါ့။
သေး သေး လေး ပါ ။
အ ထဲ မှာ ဖ လင် ပါ တယ်။
ကိုယ့် ဘာ သူ ကိုယ် လက် နဲ့ လှည့် ကြည့် ရ တဲ့ အပြာဇာတ်ကား ပေါ့။
အိမ် ပေါ် ကို တက် ခိုး တဲ့ သူ ခိုး နဲ့ အိမ် ရှင် မ မ ဇာတ်လမ်း ဖြစ် ကြ တဲ့ ကား လေး ပေါ့။
ဘ ၀ မှာ ပ ထ မ ဆုံး ကြည့် ဘူး တဲ့ လက် လှည့် ဘီ လူး ကား ပေါ့။
နောက် တစ် ရက် မှာ တော့ သူ င ယ် ချင်း က သူ တို့ အိမ် လိုက် ခဲ့ ဘို့ ခေါ် ပါ တယ်။
သူ တို့ က ညီ အကို နှစ် ယောက် က သူ တို့ အိမ် က ဖွင့်
ထား တဲ့ စား သောက် ဆိုင် မှာ အိပ် တာပါ။
ဆိုင် က အောက် ထပ် ။
သူ တို့ က အ ပေါ် ထပ် က ထပ် ခိုးေ လးမှာ အိပ် တာပါ။
သူ ငယ် ချင်း က ကျုပ် ကို ည အိမ် ပြန် မ အိပ် ဘူး လို့ အိမ် ကို ပြော ခဲ့ လို့ မှာ ပါ တယ်။
ည ဆယ် နာ ရီ လောက် ဆိုင် ပိတ် တော့ သူ တို့ အိမ် က လူ တို့ လဲ သူ တို့ အိမ် သူ တို့ ပြန်
ကြ ပါ တယ်။
ခဏ လဲ နေ ရော သူ့  အ ကို ရဲ့ သူ ငယ် ချင်း တွေ ရောက် လာ ပါ တယ်။
ပြီး တော့ သူ တို့ အခန်း နံ ရံ ကြီး မှာ ပိတ် ဖြူ နဲ့ ပိတ် ကား ထောင် လိုက် ပါ တယ်။
နောက် တော့ ရုပ် ရှင် ပြ စက် အ သေး လေး ကို ဆင် ပါ တယ်။
သိပ် မကြာ ခင် ဒီ အခန်း လေး ထဲ ကို လူ တွေ အလျို လျို နဲ့ ရောက် လာ ပါတယ်။
လူ လဲ စုံ ရော ဓ်ါတ် ရှင် ပြ ပါ တော့ တယ်။
ဘေး အိမ် တွေ ကြား မှာ စိုး တော့ ကက် ဆက် ကို လဲ
ခပ်ကျယ် ကျယ် ဖွင့် ထား ရ သေး တယ်။
ဒါ က တော့ ဘ ၀ မှ ပ ထ မ ဆုံး ကြည့် ဘူး တဲ့ စက်နဲ့ ပြ တဲ့ ဘီ လူး ကား ပေါ့။
ကျုပ် နဲ့ ဒီ လို ဟာ တွေ နဲ့ စ တင် ထိ တွေ့  တာ လေး ပြော ပြ တာ ပါ။
ဒါပေ မယ့် လည်း ကျုပ် တို့  ငယ် ဘ၀ မှာ ဖို နဲ့ မ အ ရှင် လတ် လတ်
ဟို ဒင်း ဟို ဟာ ပြု တယ် ဆို တာ မ မြင် ဘူး ခဲ့တာ အ မှန် ပါ ဘဲ။
အဲ ဒီ ခေတ် က လူ တွေ က သို သို သိပ် သိပ် နေ တာ လဲ ပါ မယ်။
လူ ဦး ရေ မ ထူ ထပ် သေး တော့ ကိုယ့် အိမ် ကိုယ့်  ယာ နဲ့ လွတ် လပ် ကျယ် ပြန့် စွာ
နဲ့ လုံ လုံခြုံ ခြုံနေ နိုင် ခွင့် ရ ကြ တာ လဲ ပါ ပါ မယ်။
အဲ ဒီ ခေတ် က လဲ မှောင် မိုက် မိုက် မှာ ချောင် ကြိုက် ကြ တဲ့ အ တွဲတွေ ရှိ ပါ တယ်။
ကျုံး နံ ဘေး မှာ တက္ကသိုလ် ပါ တ် ၀န်း ကျင် မှာ ဘု ရား ကြို ဘု ရား ကြား မှာ
မန်း လေး တောင် ပေါ် က လူ ပြတ် တဲ့ နေ ရာ တွေ မှာ
မှာ ခေတ္တ ကွန်း ခို သူ တွေ ပေါ့။
ည အ ခါ လ မ သာ တဲ့ အ ခိုက် ကျုံး နံ ဘေး တို့
အောင်ပင် လယ် ကန် ဘောင်ရိုး မှာ တော့ ချစ် ဇာတ် လမ်း လေးတွေ ရှိ ကြ သပေါ့။
ဒါ ပေ မယ့် ကျုပ် တို့ က ဘဲ အ ရှာ အ ဖွေ ညံ့  လို့  လား သူ တို ကဘဲ အပုန်း ကောင်း လို့ လားတော့ မ သိ
ရုပ် ပျက် ဆင်း ပျက် အ မြင် မ တော် လောက် အောင်ေ နတာတော့
မ တွေ့ ခဲ့ တာ အမှန် ပါဘဲ။
နောက် ပိုင်း ၈၈၈၈ အပြီးးမှာ တော့ မြန်မာပြည် ခေတ် မှီ လာ ပါတယ်။
တွီဗွီ ပေါ် လာ တယ်။
အောက် စက် ပေါ် လာ တယ်။
ဗွီဒီယို တိတ် ခွေ တွေ ပေါ် လာ တယ်။
အဲ တော့ အရင် က မကြည့် ဘူး တဲ့ ဆင် ဆာ မ ပါ တဲ့ ခွေ တွေ ပေါ် လာ တယ်။
ဒီ တော့ လဲ တစ် ၀က် တစ် ပျက် သာ ပြ တဲ့ ဟတ် ကား တွေ ပေါ် လာ တယ်။
အော ကား ဖူး ကား တွေ ပေါ် လာ တယ်
ထို့ အတူ ဘဲ ဒီ လို ကား တွေ ကို ပြ တဲ့ ဗွီ ဒီယို ရုံ တွေ ပေါ် လာ တယ်။
အဲ တော့ ဒီ လို ရုံ တွေ မှာ နေ့ နေ့ ည ည တ ရား ၀င် ပြ ခွင့် ရ သေ လာက်
ကျိတ်ကျိ တ် တိုး နေ ခဲ့ ပါ တယ်။
အဲ ဒီ က စ ပြီး ကျုပ် တို့ မြန်မာ တို့ လဲ အမြင်ပေါင်း စုံ ကြောင့်
အတတ် ပေါင်း စုံ နည်းေ ပါင်း စုံ တတ် လာ ကြ တာ အ မှန် ပါဘဲ။
နောက် ပိုင်း မှာ တော့ ဒီ လို ခွေ တွေ ကို ခွေ ဆိုင် တွေ မှာ ပါ ငှား လို့ ရ လာ ပါ တယ်။
တ ရားမ ၀င် ရပ် ကွက် ကထွက် တဲ့ စကား အရ ဆို ရင် ခပ် ဟော့ ဟော့ ဟော့
ခေတ် မီ သူ မိန်း ကလေး များ က တူ ရာ လူ တွေ စုပြီး ဒီ လို ကားေ တွ ကြည့် ကြ တယ် ဆို ပြန်ပါ တယ်။
ဒီ လို ကား မျုိး တွေ ဆို တာ နိုင် ငံ ခြား က လူ တွေ
ကို ဘဲ ကြည့်ေ န ရ တာ ကနေ
ထုူးထူး ခြား ခြား တစ် ခု ပြောရ ရင် ရှစ် လေးလုံး အလွန် ကာ လ မှာ
အ မှောင် ထဲ က နှ လုံး သားဆို လားဘာ ဆို လား
မြန် မာ တွေ သ ရုပ် ဆောင် တဲ့ ကား တောင် ထွက် လာ ပါ သေး တယ်။
မှတ် မိ ပါ သေး တယ် “စာ ခင် ဗျ စာ “ ဆို တာ လေး လေ။
အဲ ဒီ ကား ထဲ က မင်း သားပဲ ပေးတာ လက် လန် ချက် ကေ တာ့ မျက် မှန် တောင် မ ချွတ် ဘူး ဗျာ။
တိုး တက် လာ တဲ့ ၂၀ရာ စု အလွန် မှာ တော့ ဂြိုဟ် တု စေ လာင်း တွေ ပေါ် လာ တယ်။
တိတ် ခွေ ခေတ် က နေ စီဒီ တွေ ဗွီ စီ ဒီ တွေ ခေတ် ရောက် လာတ ယ်။
အ ရင် က လူ မမြင် အောင် ဖွက် ပြီး တိတ် ခွေ ကို သယ် နေ ရ တဲ့ ခေတ် က နေ
စီ ဒီ ပြား လေး တွေ နဲ့ အလွယ် တ ကူ သယ် သွား လို့ ရတဲ့ ခေတ် ရောက် လာ တယ်။
နည်း ပ ညာ တွေ တိုး တက် လာ တာ နဲ့ အ မျှ ခေတ် ပေါ် ပစ္စည်း တွေကို
လူ တွေ အသုံး ချ လာ တာ နဲ့ အမျှ လူ တွေ ရဲ့ ကိုယ် ပိုင် လွတ် လပ် ခွင့် တွေ
ပျောက် ဆုံး လာ သ လို မ မြင် ကွယ် ရာ တို့ ဆိတ် ကွယ် ရာတို့ ဆို တာ လဲ
မ ရှိ သ လောက် ဖြစ် လာ ပါတယ်။
ဟို အ ရင် က ဒီ လို ဆင်း ရဲ သား ကား ဆို တာ မြန် မာကား မရှိသေ လာက်။
ဒီ နောက်ပိုင်း မှာ တော့ ဆင် ပြီး ရိုက် တဲ့ မြန်မာ ကားတွေ လဲ ရှိ။
ကိုယ့် ဘာ သာ ကို ယ် ကဲ ကြ သဲ ကြ တာ ကို မှတ် တမ်း တင် ထားတာ လဲရှိ။
လုံတယ် ထင် ပြီး တည်း ခို ခန်း မှာ သူ ငယ် ချင်းအိမ် မှာ ကဲ တာ ကို
ခိုး ရိုက် ထား တာ လဲ ရှိ။
ပန်း ခြံ ထဲ မှာ ဘုရား ကြို ဘုရား ကြား မှာ ကျောင်းစာ သင်ခန်းထဲ မှာ
သစ် ပင် အောက် မှာ ကဲ ကြ သဲ ကြ တာကို မှ ခိုး ရိုက် ထားတာ လဲ ရှိ သ ပေါ့။
ခိုး ရိုက် နေ မှန်း သိ သိ ကြီး နဲ့ အ ချစ် သဲ ပြ ကြ တာ လဲ ရှိ သ ပေါ့။
အ ရင် ကဒီ လို ကား တစ် ကား ပျံ့ နှံ့ဘို့ ဆို တာ သိပ် ခက် ခဲ့ ပါတယ်။
ခု ခေတ် မှာ တော့ ဖုန်း တွေ အဆင့်  မြင့်  လာ တော့ တစ်ယောက် နဲ့ တစ် ယောက်
ဖုန်း တစ် လုံး နဲ့ တစ် လုံး ဘလူးတုသ် လေး ဖွင့် ပြီး ရှယ် လိုက် တာ နဲ့ ရ ပါတယ်။
ကျုပ် တို့  ဆီ က လူ များက လဲ ဝေဿန္တ ရာ သွေး အ ပြည့် ရှိ ပါတယ်။
ကိုယ့် မှာ များ အ သစ် အဆန်း လေး ရ လာ ပြီးဆို ရင်
မ တောင်း ဘဲ နဲ့ကို ပေးချင် နေ ကြ တာ အမှန် ပါဘဲ။
ဒါ တွေ ကို ပျံ့ နှံ့ အောင် ဖြန့် တယ် ဆို တာက လဲ လွယ် မှ လွယ်ပါ ဘဲ။
နောက် ကွန် ပြူ တာထဲ ထည့် ထား ပြီး
မင်မိုရီ စ တစ် လေး တွေ နဲ့ ဘဲ ကူး မ လား
စီ ဒီ ဘဲ ရိုက် ထား မ လား
အင် တာ နက် က တစ် ဆင့် ပို့ မ လား
ကြိုက် သလို ဖြန့် ဝေ လို့ ရ ပါ တယ်။
ပို လွယ် တာ က တော့ တရား မ၀င် ဘူး ဆို ပေ မယ့် တရား ၀င် နီး ပါး
ဖွင့် ထား တဲ့ ဆိုင် တွေ မှာ တစ် ချပ် ငါး ရာ ပေးလိုက် ရင် အေး ဆေး ပါဘဲ။
အဲ ဒီ မှာ မြန် မာ ပြည့် အနှံ့  အပြား က မဆင် ခြင် ကြ တဲ့ စုံ တွဲ တွေ၊
ဆယ် လီ ဘ တီ တွေ ရဲ့ အ တွင်း ရေး တွေ က အား လုံး လက် ထဲ
မှာ ပွင့် လင်းမြင် သာ ဖြစ် ကုန် ပါ တယ်။
အခု ခေတ် လို အင် တာ နက် အသုံး ပြု မူ့ကျယ် ပြန့်  လာ တဲ့ အခါ မှာတော့
ဒါ ကို သီး သန့်  လုပ် တဲ့ ၀က် ဆိုက် တွေ ပေါ် လာ ပါတယ်.။
အဲ တော့ အင် တာ နက် သာ အသုံး ချ တတ် လို့ က တော့
ဥ ရော ပ ၊ အာရှ၊ အာဖရိ က ဟာ ကြည့် မ လား
ပြည် တွင်းဖြစ် စနက် ရှော့ လေး တွေ ကို ဘဲ အား ပေး ချင် သလား
ဒါ မှ မ ဟုတ် တူ တာ ချင်း မှ နှစ် သက် ပါ တဲ့ ဆို သ ဟာ တွေ ကို လေ့ လာ ချင် သလား။
လူ့ အဖြစ် က လျော ကျ လို့ တိ ရိ စ္ဆာန် နဲ့ သံ ၀ါ သ တာ ကို ကြည့် ချင် သလား ။
အကုန် မြင် ရ စေ့ မယ် စိတ် ချ။
ရုပ် ရှင် မကြည့်ချင် သ ပ ဆို ရင် လဲ
မ လုံ့  တ လုံ ဓါတ်ပုံ ကြည့် မ လား
သ ဘာ ၀ အ တိုင်း လေး ဘဲ နု နု ရွ ရွ လေဲးခံ စား ချင် သလား
ဒါ မှာ မ ဟုတ် ကျုပ် တို့  က တော့ စာ ဖတ် တာ မှ အား ရ တာ ဗျာ
ဆို ရင် လဲ စာ အုပ် ရှိ ပါ့။
ကာ တွန်း နဲ့  မှ ခံ စားချင် တယ် ဆို ရင် လဲ ကာ တွန်း
ကြိုက် တာ အ ကုန်ရ နိုင် တဲ့ တ ကယ့် “ လို တ ရ “
အင် တာ နက် ကြီး ပါ ဘဲ။
ထွက် လာ လိုက် တာ တွေ က လဲ ဟော တစ် ခု ဟောတစ်ခု။
မော် လမြိုင် က တဲ့
ကု လား ကြီး တဲ့
လေ ယာဉ် မယ် တဲ့
ပု သိမ်က တဲ့
ပဲခူး က တဲ့
မ န္တလေး က တဲ့
ဟုို တည်း ခို ခန်း က တဲ့
ဒီ တည်း ခို ခန်း က တဲ့
ဟို ကျောင်း က တဲ့
ဒီ ကျောင်း က တဲ့
ဟို လူ တဲ့
ဒီ လူ တဲ့
ထွက် လာ လိုက် တဲ့ တစ် ခန်း ရပ် ဇာတ်လမ်းတို တွေ ကတော့
လိုက် လို့ မ မှီ လောက်အောင် ကို စုံ န ဖာ စီ နေတာ ပါ ဘဲ။
အဲ တော့ လဲ ကျား ရော မ ရော
အပျိုရော အ အို ရော
အ ရွယ် ရောက် ပြီး သူ ရော
အ ရွယ် မ ရော က် သေး သူ ရော
ကလေး ရော ခွေး ရော
ဒီ သံ ၀ါ သ အမူ့ တွေကို မ ချွင်း မ ချန် ပျစ် ပျစ် နှစ်နှစ် ကြီး ကို
အ တွင်း ကျ ကျ သိ ကုန် ပါ လေရော။
ဘယ် လောက် များ သိ သ လဲ ဆို ရင်
ကျူပ် တို့ အရွယ် ကြီး တွေ မ သိ တာတွေ တောင် မှ သူ တို့ က လေး တွေ က
သိ နေ ပါ တယ် ဆို မှ တော့ “ဟိုက်….ရော…….”လို့ သာ အော် လိုက် ချင် ပါ တော့ တယ်။
တစ် ခါ က သူ တို့ ပြော နေ ကြ တာ ကို ကျုပ် က
နား စွန် နား ဖျား ကြား လို့ သွား ပြော မိ ပါ တယ်။
ကို ယ် တောင် မှ လူ နုံ စာ ရင်း ထဲ ၀င် သွား သေး တယ်။
ပ စ္စည်း မဲ့ ချက် ကြီး ဆို တဲ့ အသံ ကြားလိုက် တာနဲ့
“ဟင်္သ တာ ထွန်း ရင် ဆို တာလေ ကွာ “
လို့  ပြော လိုက် မိ ပါ တယ်။
အန်း ဒိတ် တွေ လာ မ ပြော နဲ့ တဲ့
အော် သူ တို့ လက် ထက် မှ ဘဲ ကိုယ် ထက် တောင် စုံ နေ သေး တယ်။
အော် သူ တို့ သိ တဲ့ ချက် ကြီး နဲ့ သူတို့ သိ တဲ့  ချက် ကြီး မ တူ ဘူးေ လ.။
ဟော ဒေါက်တာ ချက် ကြီး တဲ့ ည မင်း သား တဲ့ မောင် ဆေ တန် တဲ့
ကျုပ်ဖြင့် လိုက်မ မှီ တာအ မှန် ပါဘဲ။
ကဲ ထား လိုက် ပါ တော့ ။
ကျုပ် အ ဓိ က ပြော ချင် တာက ဒါ မဟုတ် ဘူး။
ဒါ က နိ ဒါန်း ပျိုး တာ။
ကို ပေါက် လက် ဆောင် အ တွေး ပါး ပါးလေး။
ကို ပေါက် လိုင်းေ ပြာင်း တယ် တော့ မ ထင် ကြ ပါ နဲ့။
ဒါ လေး က ပ ထ မ ပိုင်း ပါ
ပက်ပက်စက် စက် ရက် ရက် ရော ရော ဆို တဲ့ နာ မယ်နဲ့ ရေး ထား ပါ တယ်
ကို ကျော် ထိုက် က လဲ ဖတ် တဲ့ လူ ကို မ ရှက်တဲ့ လို့ မသတ် မှတ် ပါ ဘူး။
တော် ကြာ ပြော မ ထား လို့ ၀င် ဖတ် မိ ရင် မျက်နှာ ကြီး တွေ နီ ပြီး ရှက်မှာ စိုးလို့ ပါ။
စ ကား မစပ် ကျ နော် မယ် သိ လရှင် ကျောင်း လေး အ တွက် အလှူ ခံ နေ ပါ တယ်။
ထည့် အုံးေ နာ်။
ခု ရက် မှ ကို ကျော် ထိုက် နဲ့ကလဲ လက် ဖက် ရည် ဆိုင် မှာ မ တွေ့ ဘူးဖြစ် နေ တယ်။
ပြောရင်.. ယူအက်စ်မှာ.. မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတပုံမြင်ရဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်..။
… တီဗီတွေမှာကအစ.. F Words သုံးဆဲတာတောင်.. မမြင်ရအောင်.. မကြားရအောင်လုပ်ထားတာ…။
မြန်မာပြည်ကတော့.. လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကို.. ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးကိုင်ပြီး.. မုဒိန်းကျင့်နေသလိုပဲ..
ဒီ မှာ က တိ ကျ သော ဥ ပ ဒေ မ ရှိ ဘူး။
ရှိ ပြန် ရင် လဲ မ လိုက် နာ ဘူး။
ကျင့် လဲ မကျင့် သူုံ့း ဘူး။
ဒီ တော့ ကာ ဒါ မျိုး တွေ ဖြစ် လာ အုံး မှာ ဘဲ။
ဘာလေး ဖြစ် ဖြစ် တတ် ယောင် ကား နဲ့ ထ ထ အော် တော့
လမ်း တွေ ချော် ကုန် တာ အဲ အမှန် ပါ ဘဲ။
နိဒါန်းနဲ့တောင် အတော် ဟက်ထိကုန်ကြပြီ။
မရှက်တတ်လို့ ဝင်ဖတ်သွားပါကြောင်းးး ဟီဟိ
ရှက် တတ် သူ မ ဖတ် ရ ဆို တာ နဲ့
ဖတ် တဲ့ သူ က မရှက် လို့  ဆို ပြီး ပြော လို့ မ ရ ပါ
ရှက်ရှက် နဲ့ ဖတ် သွား တဲ့ မျက် နှာ ကြီး တွေ ကို မြင် နေ မိကြောင်း ပါ အ လက် ဆင်း
အင်း….ဒါဆို စာကိုယ်က ဒီထက်ရှည်မယ်ထင့်
တကယ်တော့ အင်တာနက်မှာလဲ သူ့စည်း သူ့ကမ်း ရှိပ
ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့်ရင် ချက်ချင်းပြန်လှည့်ခိုင်းတာ
ခက်တာက အဲဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကိစ္စပြတ်နေတော့
တရားဝင်တာ မဝင်တာတွေ၊ စည်းစနစ်ကျကျတွေ ပြောမနေတော့
ဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်နေပါစေ I understand and wish to continue လိုက်တော့
အိုးပင်း သည် ဒလဟော ပေါ့ဗျာ
အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုတော့ ကိုယ်ဘယ်သူ၊ ဘယ်အရွယ်ဆိုတာကလဲ ချက်ချင်းလက်ငင်း မသိနိုင်ဘူးကိုး…..
စည်းကမ်းကို စည်းကမ်းလို၊ ဥပဒေကို ဥပဒေလို တိတိကျကျ လိုက်နာတယ်ဆိုရင်
အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေ ဒါမျိုးတွေ ရှိစရာကို အကြောင်းမရှိ…
မှန် ပါ့  မောင် သိကြား
ရှေး ရှေး က ဒါ မျိုး ကို မြင် ရ ဘို့ ခက် သည်
အခု ကေ တာ့ မောစ်ကိုင် တတ် ရင် ရ ပြီ
အင် တာန က် ဆိုင် မှာ ဆို ၀က် ဆိုက် လိပ် စာ မသိ လဲ ကြည့် လို့ ရတယ်
ကိုယ့်ေ၇ှ့ က ကောင် ဖွင့် ကြည့် သွား တဲ့ အထဲ က ကိုယ် ကြိုက် တာကို မောစ် စေ လး နဲ့ ခေါက် လိုက် ရင်
ကျ လာ တယ် လေ။
န ည်း ပေး တယ် တော့ မ ထင် နဲ့  နော်
နောက် ဆိုင အ တော် များ များ က လည်း
ဒါ မျုိး လေး တွေ ကို ဒေါင်း လုပ် ဆွဲ ပြီး ထည့်  ပေး ထား တော့
အ ဆင် သင့် ကောက် စား ကိုယ် ကြိုက် ရင် ကော် ပီ ကူး သွား လိုက် ရုံ ဘဲ။
ကျ နော် က အင် တာ နက် ဆိုင် ပေါင်း စုံ လှည့်  သူံး ရ တဲ့ သူ မို့ ဒါ တွေ ကို သိ နေ တာ ပါ။
အဲ့ဒီ ခလေးမွေးတဲ့ အကြောင်းကို တွေးမိပြီး လူကြီးတွေကို မေးဖူးသေးတယ် ..
အဲ့တော့ .. အဲ့လိုပဲ ..
ကျားနဲ့မ တူတူအိပ်ရင် ကလေးရတယ်လို့ ပြောတယ် …
အဲ့ဒါကို ကြားမိပီး .. မိန်းခေးတွေနဲ့ အတူတူ အိပ်ရဲခဲ့ဘူးရယ် …
အေးပါ နောက် မ ကြာ ခင်…………………
ဒန် ဒန့် ဒန် ပါ နော်
မင်း လည် မ လို လို နဲ့ အ တာ နော်
ယောကျာ် လေး က ဘီး မ ကြိုက် ဘူး အေ့
ကျွန်တော် ယပ်ခတ်ပေးပြီးနောက် လေးပေါက် က ပန်ကာပါ ထပ်တပ်ပေးတာပေါ့လေ..
မရှက်ဘဲ ပြောရရင် ကျွန်တော်ဆို ၆ တန်းမှာ စာအုပ် အ၀ါ မိတ်ဆက်ခံထိခဲ့ပါပြီ ။ လေးပေါက်ပြောသလို နောက်ဆုံးတန်းက ကျောင်းသားကြီးများရဲ့ ကောင်းမှုဘဲလေ ..
ဆိုတော့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှစ်ခု ကြား သာ ကွာဟသည် မြင်မိကြောင်းပါ ။
ပ ထ မ ရွာ ထဲ က ဖဲ သ မား တွေ ထွက် လာ တယ်
ဒု တိယ ရွာ ထဲ က ဆိုက် ကား ဆ ရာ တွေ ထွက် လာ တယ်
တ တိ ယ ရွာ ထဲ က အ ပြာ စာ အုပ်သမား တွေ ထွက် လာ မယ်
နောက် တစ် ပုဒ်တင် ပြီး ရင် တော့ ရွာ ထဲက ………………………………………
နောက်တစ်ပုဒ်အား ဝင်ဖတ်ရန် လက်တွန့်နေကြောင်းးးး ဟီဟိ
မောင် မာ ဃ လက် တွန့် တယ်ပြော ရေ အောင် မင်း က ရှက် လို့ လက် ကေ လးနဲ့ ကွယ် ဖတ် နေ တာ လား အေ့
သြော် … ကြားဖူးတာလေးဝင်မေးဦးမှ
ဒီလိုဗျို့ … သဂျီးတို့ ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝလောက်က
တစ်ရဲ ကို တစ်ကျပ် တဲ့
တစ်ရှဲ ကို သုံးကျပ် တဲ့
အဲဒါ ကြားသာကြားဖူးတယ် နားမလည်ဘူးဖြစ်နေလို့
သဂျီးနဲ့တွေ့ရင် မေးပေးပါလား အစ်ကိုကြီးရေ
အဲဒီစံပြရုံခေတ်ရယ်.. ကေသွယ်ရုံခေတ်ရယ်ကို ကျုပ်လည်းမမှီလိုက်လို့မသိဘူး..
သူ ကြိး အ စွမ်း နဲ့ ရှာ ဖွေ မွှေ နှောက် ပြီး တင် ပေး စမ်း ပါ ဗျာ
ကျုပ် က မန်းလေး က ဆို တော့ ရန်ကုန် အ ကြောင်း မသိ ဘူး။
ပြော ရ အုံး မယ် ဘီ လူးကား တွေ စ ပြ ခါ စ က
လက် မှတ် ဖြတ် တာ က တစ် နေ ရာ
ဗွီ ဒီ ယို ကြည့် တာ က တစ် နေရာ
စက် ဘီး တွေ ထားရ တာ တစ် နေ ရာ ကိုယ့် ဖိ နပ်ကို ခါး ကြားထိုး ထား
အိမ် အ ပေါ် ထပ် မှာ တံ ခါး အ လုံ ပိတ် ပြ တာ
တကယ့်ကို အပေါ် ပူ အောက် ပူ ကြီး ပါ ဗျာ
ကေသွယ်ကမှ တကယ့်နေရာ ၊
သားသားက တော်ဝင် ၊ ယုဇန ရုံတွေမှာပြတဲ့
ဂေါ်ဇီလာကားတို့ ကင်းကောင်ကားတို့ ၊
ပပဝင်းရုံက စစ်ကားတို့ ဂျိန်းစ်ဘွန်းကားတို့ကိုပဲကြည့်တာ ၊
အချစ်ကား နဲ့ ဇာတ်အေးကားတွေက ဂုဏ်ရုံမှာ ၊
အခုတော့ အဲဒီ ၄ ရုံလုံး မရှိတော့ပါဘူး ၊
အိုအိချိတို့.. တီလုံးတို့..ဒေဗစ်ချမ်းတို့… ပြတဲ့.. တော်ဝင်ရုံမီလိုက်တယ်ပေါ့..
အာအိုင်တီတက်တုံးက အဆောင်ကျောင်းသားတွေ.. ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေထဲ.. ဘီလူးကားအုပ်စုလိုက်… သွားကြည့်ကြတာတွေပါတယ်..။
မတ်၁၃ အမှတ်တရပြောပြရရင်.. အဲဒီကြို့ကုန်း..ဘီပီအိုင်ထဲက ရပ်ကွက်အိမ်တွေ.. ရပ်ကွက်သားတွေထဲ.. အာအိုင်တီကျောင်းသားတွေ ရောထွေးပြီးနေကြ.. ဗီဒီယိုကြည့်ကြ..အရက်သောက်ကြ.. နဲ့.. လုံးထွေးနေတာပါ..။
အာအိုင်တီထုံးစံက.. ၂နှစ်ကျရင်.. အိပ်စ်တာနယ်(အပြင်ဖြေ) ဖြစ်တယ်လေ..
( ကဲ ထား လိုက် ပါ တော့ ။
ဒါ က နိ ဒါန်း ပျိုး တာ။)
အဲ ဖတ်လာလိုက်တာ အဆုံးရောက်မှ ဒါအစ ဆိုတော့………. ဆက်ပြောရင်ပြော မပြောလို့ကတော့ ဒီလူကြီးတွေ့မယ်နော်။
ကို ခ က လဲလော ရ န် ကော ပြော မှာ ပါ
ဒု တိယ ပိုင်း က အ ခု ခေါင်း စဉ် တော့ ရေး ပြီး နေ ပါ ပြီ
အပိုင်း ဘယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးတင်မှာလဲငင် …ေိခိ
နှစ် ပိုင်း ထဲ နဲ့ အပြတ် ရေး မှာ ပါ။
ခါ တိုင်း လို ပေ မ ရှည် တော့ ဘူး နော်
အမျိုးသား သီးသန့် ပညာခန်းဖလှယ်တဲ့ပို့စ်များလား ?????
အမျိုးသမီးများအတွက် ဆောင်ပုဒ်ကတော့ သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ တဲ့
သိတိုင်းပြောလို့မကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလို့သဘောထားပြီး ဖတ်သွားပါကြောင်း
ဲ့အဲ့ဆောင်ပုဒ်ကြောင့် သများလည်း ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်နေတယ်လို့ ပြောချင်နေတာ.. ဟိ
အံ မယ် ဒေါ် လုံ မ လေး က လဲ ဒီ ပိုစ် က လဲ ဖတ် ရုံ ဘဲ ဖတ် ဘို့ ရေး တာ လေ ကွယ်
အိ ကျိ ပြား လေး ရယ်
နောင် လာ နောက် သား တွေ အငြင်း မ ပွား ရ လေ အောင်
ဘွ နဲ့ ရင်း ပြီး အ ထုပ် ဖြေ ပြ ရ တာ ပါ ကွဲ့။
ဒါ လေး ဘာ လို့ ရေး လဲ ဆို တာ နောက် တစ်ပိုင်း ကျ ရင် သ ဘော ပေါက် သွား ပါ မယ်
ဟတ်ကဲ့ ဆက်လက်ဖတ်ရှု အားပေးအုံးမီဖစ်ကြောင်း…
ဟုတ် ကဲ့ ကျ နော် ခေါင်း စဉ် တော့ ရေး ထား ပြီး ပါ ပြီ ခင်ဗျာ
ပက် ပက် စက် စက် ရက် ရက် ရော ရော
ဆိုတဲ့ နာ မယ် နဲ့ လာ ပါ မည်
တ ကယ့် ကို ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ ဖြစ် ပေ သ ကိုး
မ စ နိုး ရေ
ဒါ တောင် လက် ကုန် မ ရေး သေး ပါ ဘူး။
အ များ ပြည် သူ များ ကြည့်ရူ့ ရန် မ သင့် တာ တွေ ကို ကပ် ကြေး နဲ့ ဖြတ် ပြီး မှ ရေး တာ ပါ။
အင်း..ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိ…ကိုပေါက်လိုပဲတွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသည်ဟုသာ(အသက်က မတိမ် မယိမ်းကိုး)..ရှေ့ဆက်ကိုပေါက်ဘာပြောမယ်ဆိုတာ စောင့်နားထောင်ပါအုံးမယ်…ခုတွေးနေမိတာတော့…
အော် ကို မိုက် စ်
ဘုန်း ကြီး ၀တ် တာ ကို လာ ထိ တာ နှစ်ယောက် ရှိ သွား ပြီ
ဟို နေ့ က တတစ်ယောက်
ကဗျာ အ ဟောင်း လေး တင် မိပါ တယ် အောက် က ဆက် ရေး သွား ပါ သည်။
ဒါ ကမူရင်းက ဗျာ
သူ က ဘယ် လို ပြင် ပေး သွားလဲဆို တော့
(လေ ပွေ က အ ရူး လမ်း လျောက် သလို ခ ရီး ဆက်
သစ် ရွက် ကြွေ တွေ က လက် ခုတ် တီး လို့ နှုတ် ဆက်
ဥ သြ က လဲ အ လွမ်း တေး တွေ ဆက်
နေ မင်း က မ ညှာ မ တာ ရက် စက်
အ ခု ရေး နေ တာ က ကျွန် တော်
ဘုန်း ကြီး လူ ထွက်) တဲ့ ကဲ
ဘယ် လောက် ကောင်း လိုက် ပါ သ လဲ။
ဒါ တောင် ပ ညာ သင် မို့လို့ 
အဲ လောက် ဘဲ ရေး တတ် လို့ 
သက် သာ တယ် မှတ် ပါ :))))))
တော် ပါ သေး ၏ ပညာသင် မို့ လို့
ပညာရှင် အဆင့် နဲ့ ဆို လို့ ကေ တာ့
ဒန် ဒန့် ဒန် ဘဲ နော်
ဘာမှမသိလို့ လူပျိူကြီးဖြစ်နေတာနဲ့ တူပါရဲ့လေးပေါက်ရေ
မိုး မင်း သား လေး လဲ သင် တန်း တက် ခိုင်း ရ အုံးမ ယ်
ရှေ့ပိုင်းမယ် ကျားတွေချည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် အော်ကျယ်အော်ကျယ်ဆွေးနွေးနေလို့ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်တော့မလို့။ အောက်မယ် ကွမ်းတောင်ကိုင်တွေ ဖတ်ကြောင်းပြောမှပဲ ၀င်နဲနဲပြောလိုက်အုံးမယ်။ မနက်မနက်ကန်ဘောင်ကိုလမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ ညမြင်ကွင်းကတော့ တခါရေးပြီးပြီမို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ မနက်လျှောက်တော့လဲ ကိုယ့်ထက်တောင် ၀ီရိယပိုနေကြသေး။ အစောကြီးရောက်နေကြတယ်။ ညပိုင်းတွေကတော့ သက်လတ်ပိုင်းတွေများပေမဲ့ မနက်စောစောကျတော့ ခုနစ်တန်း ရှစ်တန်းအရွယ်လောက်ကလေးတွေ အမြင်မတော်ချက်။ လက်တည့်စမ်းမဲ့ အရွယ်တွေမို့ ဆက်မတွေးချင်တော့တာနဲ့ ခုထိတော့ မတွေးမိသေးဘူး။ လေးပေါက်ပိုစ့်ဖတ်မှနဲနဲထပ်တွေးလိုက်အုံးမယ်
်မွ သဲ ရေ ပါး ပါးေ လး ပါ အေ့
တွေး မိ တာ လဲ ရေး ပါ အုံး
ရှက် ရင် မ ဖတ် နဲ့ လို့ ဆို ပေ မယ့် ဖတ် သူတိုင်း မရှက် လို့ မဆို လို ပါ ကေဇီ ရေ
ထင်မြင် ချက် လေးကြားချင် ပါ သေးတယ်
ပြောစရာတော့ မရှိပါဘူး လေးပေါက်ရယ်။
သူများတွေလည်း သူတို့ကြိုက်တာ သူတို့လုပ်တာ။
ကျနော်လည်း ကျနော်ကြိုက်တာ ကျနော်လုပ်မှာ။
အဲတော့ ကိုယ်စိုက်တဲ့ အပင် ကိုယ်ရိတ်ကြရမှာဆိုတော့ ဘယ်သူ့မှ ထင်မြင်ချက် မပေးတော့ပါဘူးးးး
မ မာ ဒီ လောက် နဲ့ ချို ထား လို့ ဘယ် ရ မ လဲ
ဆေး ပညာ ရှု့ ဒေါင့် ကသုံးသပ် ချက် လေးေ တွ လုပ် ပါ အုံး
အမှန်တော့ ကိုပေါက် ရေးတာက သိပ်ပြီး တစ်တစ်ခွခွ မပါပါဘူး။ ဖြစ်စဉ်ကိုပဲ ရေးချင်တာပါ။ ဥပမာ ကိုပေါက်ရေးတဲ့ ဟိုဒင်းဟိုဟာ ကိစ္စဆိုရင် တခြားလူတယောက်ဆို တစ်တစ်ခွခွ စကားလုံးသုံးပြီး ရေးမှာပေါ့။
အမှန်တော့ ဒီရက်ပိုင်း ကျနော်လည်း ဒါကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ရေးရင် ကောင်းမလားလည်း စဉ်းစားတယ်။ ရေးရမှာလည်း စိတ်ပျက်စရာကြီးပဲဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒါက အခု ရာသီစာလို ဖြစ်နေတယ်။
အော် မေ့လို့ ရေးရင်တော့ ကိုပေါက်နဲ့ ကျနော် မြင်တာခြင်း တူမလားတောင် မသိဘူး။ အစချီထားပုံတော့ မတူဘူး။ ရေးရင်လည်း အများကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ် အကိုရေ။
ကို စံ လှ ကြီး ရေ ဒီ ပိုစ် ကိုေ၇း ပြီး တစ် ၀က်မှာ ဆက်ရေး ဘို့ လက်တွန့်ပါတယ်။
အဲ တော့ စာ ဖတ် နာ တဲ့အမျုိး သမီး တစ် ယောက် ကို ပြ ကြည့်ပါ တယ်။
မ ရိုင်းပါ လို့ ဖြေ တယ်။
နောက် ကိုယ့် ထက် ငယ် တဲ့ကလေးကို ပြ ကြည် ပါတယ်။
လေးေ ပါက် ဆော် သာ ဆော် တဲ့။
အဲ တော့ ဆက် ရေး ဖြစ် ပါ တယ်။
တတ် နိုင် သေ လာက် ညင် ညင် သာ သာ လေး ပါ။
ဒါ ပေ မယ့် ဒါ က ပတ် ပျိုး လေး ပါ ။
နောက်တစ်ပုဒ် က တော့ အများ သိ တဲ့ အ ကြောင်းေ လး ပေါ့
ကို စံလှ ကြီး လဲ ရေး ပါ
မတူ သော အမြင်တူ သော အမြင် တွေ တွေး ကြည့်ရ အောင် ပါ။
မိဘတိုင်း ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ “သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့” ဖတ်သင့်ပါသည် ဟု ယူဆမိပါကြောင်း ဦးပေါက်ရေ။ အနော်ငယ်ငယ်ကဆို ထူးတယ်လို့ပဲ ပြောရမလားမသိဘူး ရှက်ရှက်နဲ့ အထုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထုပ်ဖြည်ရဦးမယ်။ 11 နှစ်နဲ့ Wet Dream တွေ စမက်တယ်။ 12နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ် ဆီးခုံမွှေးစထူတယ်ဂျ။ ဒချိ ဒချိ ရှက်တက်ရင် အနော့ကောမန့်ကို မဖတ်ကြပါနဲ့ညော်
အေး ကွာမင်း ပြော မှ လေး ပေါက် တောင် ပြန်စဉ်း စားရ မယ်
ဘယ် အချိန် မှာ ကျုပ် လဲ အ မွှေး အတောင်စုံ သလဲ ဆို တာကို
ပိုင်ေ လး က မှတ် ဥာဏ် အ တော် ကောင်း တာဘဲ
သေ ချာ ကိုမှတ်မိ နေတာ ကိုး
ကို​ပေါက်​​ပြောတဲ့ ဟာ​တွေ အကုန်​ face book ထဲမှာရှိတယ်​ ဘယ်​မှလိုက်​ပြီး ​မေး​နေစရာ မလိုဘူး ဆပ်​ရှ်​ က​နေ စာလုံး တစ်​လုံး ( မရှက်​တတ်​ရင်​​ပေါ့​လေ-ဟုတ်​တယ်​​နော်​ မရှက်​တတ်​မှ ဖြစ်​မှာ ) ရိုက်​ပီး ရှာလိုက်​ ရှိသမျှ ထွက်​ကျလာလိမ့်​မယ်​ ။ သင်​​ပေး​နေတာမဟုတ်​ ကျွန်​​တော်​​တို့ အင်​တာနက်​သုံးကာစက ဖွဘုတ်​က အဲ့​လောက်​မဆိုး​သေးဘူး ကိုယ်​ ကကြည့်​ချင်​မြင်​ချင်​ရင်​ ၀က်​ဆိုဒ်​​တွေက လိုက်​ရှာရတာမျိုး ခု​တော့ ဘယ်​၀က်​ဆိုဒ်​မှ သွားစရာမလို တစ်​​နေရာထဲမှာ အကုန်​ရှိတယ်​
မှတ်​ချက်​ ။ Like ​တော့ သွားမလုပ်​ကြနဲ့​နော်​ ဟို​နေ့က ​နေပူ​တော်​က လူကြီးလိုဖြစ်​သွားလို့ သူ့ က အဲ့ page ကို Like သွားနှိပ်​လိုက်​တာ Fri 5000 နဲ့ follower 20000 ​ကျော်​ဆီ ×××× Like ®¥€£©©#~ ဆိုပီး New Feed ​တွေ တက်​ကုန်​လုိ့ ရှက်​စရာ​တွေ​ပေါ်ကုန်​ပါ​လေ​ရော
ဒါတွေက ရှက်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုပေါက်ရေ …
တတ် သိ နားလည် သွားရမယ့် ဟာ တွေပါပဲ…
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒါတွေက လူ / လူ့ဘ၀ ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
အင်း …. စီစဉ်တကျ စံနစ်တကျ တတ်သိသွားရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့….။
ကျွန်တော့် လက်ဦးဆရာကတော့ ပီမိုးနင်းပါ..
ငယ်ငယ်ကတည်းက စာဖတ်ဝါသနာလေးရှိတော့ အဲတာလေးက အဆင်ပြေသွားတယ်။
၁၇ နှစ်သား တက္ကသိုလ်စရောက်တော့ နေရာအစုံက အဆောင်သားတွေကြားမှာ
ဆရာ … ဖြစ်နေပြီ…။
၀ါရင့် ကျောင်းသားကြီးတွေဆီကတော့ မွမ်းမံသင်တန်း တက်ရသေးသပေါ့…
နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလဲ အဲသလိုပဲ အစီစဉ်တကျ-
သိ တာက လက်ဦးပြီး တတ် တာက နောက်မှလိုက်တာမျိုး ဖြစ်စေချင်မိပါတယ်။
လေးပေါက်ကောင်းတယ်ဆို ကျွန်တော်နာခံပါ့ မယ်